Xubno ka mid ah Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo is-casilay « SAWNEWS NETWORK
« Idaacadda VOA(Codka Maraykanka) oo wariyayaasheeda Puntland shaqo joojin lagu sameeyay
Hoggaankii Guddida Doorashooyinka Somaliland iyo xubno kale oo xilka iska casilay »
Xubno ka mid ah Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo is-casilay
Posted by Sawnews.tk on October 3, 2009
Hargeysa (Qarannews)- Laba Xubnood oo ka tirsan Komishanka Qaranka Somaliland ayaa iska casilay Xilkii ay ka hayeen guddidaas, maalin uun ka dib markii Axsaabta Qaranku isla qaateen in la bedelo guud ahaan 7-da xubnood ee Komishanka. Iyada oo Xisbiga UCID uu ka hadlay waqtiga ay imanayaan Khuburada kala-shaandhaynta Diiwaangelinta iyo xilliga laga yaabo in la dhammaystiro magacaabista xubnaha cusub ee Komishanka.
Xisbiga UCID ayaa sheegay inkasta oo ay ku doodeen in aanay jirin sabab loo bedelo saddex xubnood oo ka mid ah Komishanka Doorashooyinka oo kala ah, Khadar Maxamed Guuleed oo Xisbigaasi soo magacaabay, Xasan Cumar Hoorri iyo Ismaaciil Muuse Nuur oo iyana ay soo magacaabeen Guurtidu, haddana ay aakhirkii waafaqeen mabdi’iyan in la wada bedelo dhammaan Xubnaha Komishanka. “Xubinta nagaga jira anagu waa Khadar oo waa nin ay u baahan yahay dalka iyo Komishanku oo Aqoonyahan ah, wax loogu darana ma aragno. Mana rumaysnin in la bedelo Xubintayada, Xubinta Guurtidu magacawday ee Ismaaciil iyo Xasan Cumar Hoorri laftiisa oo aanu u aragno inay yihiin aqoonyahanno aan in badan shaqaynin oo xilkaa gudan karaya. Hase ahaatee, kulankii aanu yeelanay saddexdayada Xisbi ee aanu la yeelanay Weftiga Itoobiya ayaa dhinaca kale waxa ka soo fushay fikir ah in la bedelo xubnaha oo dhan. Markaa waxaanu nidhi si hawlaha loo dedejiyo hadiiba xalku ku jiro, mabda’ ahaan waanu qaadanay oo waa wixii u dambeeyay ee laysla qaato.” Sidaa waxa Wargeyska Ogaal u sheegay Murashaxa Madaxweyne-xigeenka ee Xisbiga UCID Dr. Maxamed-Rashiid Sh. Xasan oo Wargeysku wax ka waydiiyay arrinta bedelaadda xubnaha Komishanka.
Dr. Maxamed oo Wargeysku wax ka sii waydiiyay cidda ay Xubintooda ku bedelayaan marka la wada bedelo Xubnaha, ayaa ku jawaabay oo uu yidhi, “Anagu hadii la diido waa dood cusub, laakiin waxaanu soo celinaynaa Sharci-yaqaanka nagaga jira Komishanka ee Khadar. Waxaananu jecelnahay in la soo celiyo labada xubnood ee kale ee Ismaaciil (Guddoomiyihii Diiwaangelinta) iyo Xasan Cumar Hoorri” waxaanu ka sii hadlay waxa u qorshaysan haddiiba la diido soo-celinta xubintooda. “Haddii xubintayada la diido, waanu ku doodi doonaa intii aanu ku doodi karno. Wax loo diidi karo oo loogu dari karo Xubintayada (Xubnaha la bedelayo) ma aragno, dooddaana waanu dhiibanay. Markaa wax lagu bedelo ma garan karno. Hase ahaatee, waxaabanu maqalnay in uu isagu (Xubinta UCID ee Komishanka) fududaynayo arrimaha oo uu is-casilayo. Balse, mustaqbalka ayaanu ka hadli doonaa.” Ayuu yidhi Dr. Maxamed-Rashiid.
Mar aanu Murahsaxa wax ka waydiinay waxyaabaha ilaa hadda ka fulay Heshiiskii la gaadhay, waqtiga ay dalka imanayaan Khuburada kala-shaandhaynta Natiijada Diiwaangelinta iyo xillliga ugu dambayn laga yaabo in la soo wada magacaabo xubnaha cusub ee Komishanka ee bedelay xubnahan hadda, ayaa wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi, ““Horta ugu horrayn, Ilaa hadda xagga waqtiga oo aad mooddo inay yara caga-jiidayaan moooyaane, niyaddii wanaagsanayd waxaad moodda inay taalo dhinaca Xisbiga UDUB iyo Xukuumadda. Qoladii Khuburada ahaydna waxay imanayaan sida ugu dhaqsaha badan oo kaliya waxay sugayaan inta la magacaabayo Komishanka.” Waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Ugu dambayn wax alaga yaabaa inay axadda wada dhammaado magacaabistu, waxaana laga yaabaa in Isniinta ay wada dhammaystirmaan Komishan ahaan xubnuhu.”
Dhinaca kale, laba Xubnood oo ka tirsan Xubnaha Komishanka Doorashooyinka Somaliland ayaa la sheegay inay iska casileen xilkii ay hayeen, maalin ka dib markii ay Axsaabta Siyaasaddu isku raaceen in la wada bedelo dhammaantood.
Labadan Xubnood ayaa la sheegay inay kala yihiin Khadar Maxamed Guuleed oo ah xubinta uu soo magacaabay Xisbiga UCID, isla markaana bedeshay Xubintii hore ee Xisbiga ee dhawaan geeriyooday Marxuum Axmed X. Bidaar iyo Ismaaciil Muuse Nuur oo ahaa Guddoomiyihii Guddida Diiwaangelinta.
Inkasta oo aanu la xidhiidhnay labada Xubnoodba, haddana waxa noo suurtogashay in aanu helno Khadar Maxamed Guuleed oo ah Xubinta Xisbiga UCID. Waxaanu shaaca ka qaaday inay jirto is-casilaaddaasi, isla markaana uu maanta u Qoraalka is-casilaadda gudbinayo. Waxaanu ka hadlay sababta ku kalliftay inuu is-casilo oo uu ku tilmaamay inay tahay arrinta taagan ee Komishanka. “Waa rasmi oo way jirtaa (Is-casilaaddu). Waad arkaysaa in dareenka kaliya ee maanta taagani uu yahay Komishanka, dee markaa waxa sabab u ah arrimaha taagan ee Komishanka. Beri (maanta) ayaanan gudbinayaa Qoraalka is-casilaadda.” Ayuu yidhi Khadar Maxamed Guuleed. Hase ahaatee, inkasta oo aanu la xidhiidhnay xubinta kale ee la sheegay inuu is-casilayo ee Ismaaciil Muuse Nuur, haddana noomay suurtogelin in aanu helno.
Geesta kale, mar aanu xalay iyana la xidhiidhnay Xisbiga kale ee Mucaaradka ah ee KULMIYE, si aanu wax uga waydiino dhinacooda inay magacaabeen xubintii bedeli lahayd xubinta hadda kaga jirta Komishanka, waxay sheegeen in aanay Xisbi ahaan weli laysla qaadan xubintii bedeli lahayd.
Sidoo kale, warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Madaxweyne Rayaale Axsaabta Mucaaradka ah ku wargeliyay saddex xubnood uu soo magacaabayo. Kuwaas oo aan la shaacinin Magacyadooda.
Source Wargayska Ogaal
This entry was posted on October 3, 2009 at 12:37 pm	and is filed under News (Warka). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.